Umthwalo ingenye izigaba zomthetho main. It is kabanzi komthetho. Hlukanisa zomthetho, zokuziphatha, isigebengu, ngokuhlanganyela futhi njalo ibe severally.
nesibopho emphakathini uhlobo Gnostic. Lo mqondo kuhlanganisa zonke izinhlobo engavela emalungeni ayo maqondana nomunye. Ezinye izibopho acace kakhulu (isib, benesibopho).
Kukhona ekhethekile izinhlobo umthwalo, okuyizinto ezihlobene impahla. Lokhu ubunikazi wabelane, icala ngokuhlanganyela futhi ngokuzibona.
Ngo civil umthetho yimaphi ukwephulwa of ubudlelwano impahla sehlukaniswe non-nezivumelwano kanye nezivumelwano.
Okuxoxiswane kwenzeka uma kwenzeka ukuthi yimiphi amaqembu iphula imithetho noma izimfuneko idokhumenti ngemvume. Non-nezivumelwano singenzeka ngenxa yokuthi uye wahlupheka ukulinyazwa kwempahla noma umuntu ezimweni ezingahlobene lesi sivumelwano. Futhi, ivamise ukubizwa ngokuthi tort.
Futhi isibopho nezivumelwano kanye non-izivumelwano kungenzeka ngokuhlanganyela, izivumelwano noma inkampani. Fractional ngokuyinhloko lisho ukuthi zonke transponder ziyisibopho nesibopho kuphela kuze kube sezingeni ngezabelo zabo. Usayizi amasheya abo isethwe isivumelwane noma umthetho.
ISolidarity kuyinto ukulingana esiqinile. Kulokhu sikhuluma iqiniso lokuthi isisulu ummangali unelungelo eligcwele lokufuna ukunxeshezelwa kusuka bonke abamangalelwa ngokulinganayo noma okunye konke lizokubuyisela ummangalelwa eyodwa kuphela. Underreceived nomunye ummangalelwa angase kufunwe kusuka kwenye. Ummangali e iningi amacala wayebhekisele kulabo kudingeke uzikhokhele. Ngezinye izikhathi izikweletu phakathi abamangalelwa kwesigaba kwenzeka ngokuphelele ngaphandle kolwazi lwakhe.
Kufanele kuqashelwe ukuthi umthwalo ahlangene okwenza isikhundla isisulu lithembeke kakhulu futhi inzuzo kakhulu. Sisebenza ezimweni lapho ezibekwe umthetho noma inkontileka.
isibopho sezomthetho ngokuzibona - uyinto eyengeziwe maqondana umthwalo wemfanelo oyinhloko azithathele osonile isisulu. Lo msebenzi eningakuthwala hhayi kuphela umuntu umlimaze kunoma ubani - ke kaningi phezu kwabantu azisetshenziswa ukoniwa. isibopho sezomthetho ngokuzibona - yilokhu ububonisa focus compensatory zonke kuhilele ecaleni elimayelana nezakhamuzi.
Ukuze umuntu isibopho sezomthetho ngokuzibona eza yazi ngesikathi ummangalelwa enqaba ukuhambisana ezidinga ukusebenza lapho ummangali ephikelela. Imithetho General musa ukusungula isikhundla ukuthi ummangalelwa ubophekile ukuba niphendule izikweletu kwazo zonke izimpahla zalo.
isibopho sezomthetho ngokuzibona kusekelwe ubudlelwano phakathi kwezinhlangano. Ngokuyisisekelo kuza ngesikhathi ummangalelwa sebekubeke uyenqaba kona-. Hhayi kucatshangelwe indlela lapho izimpahla anazo. Njengoba isibonelo yisibopho guarantors.
isibopho sezomthetho ngokuzibona kusekelwe ebuhlotsheni non-nezivumelwano ezimweni uma kuziwa ezikweletini of izinhlangano ezingokomthetho noma ubugebengu ezenziwa abantu abancane. Ucabanga amafemu kuholela yokuthi abasunguli ayaqala ukuba asule impahla yabo. Abazali kudingeka ukuthi alungise noma yiphi umonakalo owenziwe abantu besithathu ingane yabo ezincane, ngisho noma lokhu sebekubeke ungavumelani.
Nge isibopho sezomthetho ngokuzibona futhi ukwazi abanikazi izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba izikhungo. izinhlangano zabo ezingokomthetho nokushoda kwezimali, balindeleke ukuba bakwazi ukukhokhela izindleko zabo.
Yini okudingeka SNILS? Yini odinga SNILS ingane?
Yiziphi imisebenzi squad: esiteshini umlilo, eziphuthumayo, amaphoyisa, ibutho?
I yabafileyo, noma indlela yokubala izinsuku 9 ngemva kokufa
Ukukhetha esiqandisini yasendlini ukunikeza
Ukolweni okusanhlamvu. izakhiwo ewusizo umkhiqizo esekelwe okusanhlamvu ezahlukene
Moscow Academic Umculo Theatre: umlando, repertoire, qembu
Tabito iyiphi / ezinye: ukusetshenziswa izibonelo kanye umzimba